Doorashadda Somaliland oo lagu dhaliilay inay Codeeyeen Caruur Aan Qaangaarin. – Hornafrik Media Network
Kormeerayaashii Caalamiga ahaa ee Doorashadda Somaliland ayaa Warbixin kooban oo ay soo saareen waxay ku bogaadiyeen Habsami u socodka Doorashaddii Somaliland, marka laga reebo arrimaha qaar oo ay dhaliileen.
Kormeerayaashu waxay ku ammaaneen Guddiga Doorashadda inay si sax ah u fuliyeen Jadwalka Doorashadda, Isla markaana aysan Cabaqado ka jirin Goobaha Doorashadda, marka laga reebo in Meelaha qaarkood buuq dhacay aan habkii saxda ahaa loo marin Xalintooda, iyo Meelaha Qaar loo diiday Guddigooda Kormeerayaasha inay galaan, sidaas si la mid ahna lagu wargaliyay inay isaga tagaan Goobaha Qaar ee Cod Bixinta.
Kormeerayaasha waxay sidoo kale sheegeen in Goobaha qaarkood ay codeeyeen Caruur aan qaan Gaarin, kuwaasoo watay Kaararka Codaynta. Waxay sidoo kale sheegeen in meelaha qaar ay Ciidanku soo faragalinayeen habka ay wax u socdaan.
Warbixinta Kormeerayaasha oo dhamaystiran waxay soo baxaysaa Sannadka soo socda.